DEPIOTE TIM SY NY MPANOHITRA : Mikasa hanakorontana sy hamory olona indray
Mikasa hanao hetsika ao an-drenivohitry ny Faritra Vakinankaratra ao Antsirabe indray ireo solombavambahoaka mpanohitra sy ny vondron’ny mpanohitra eto Madagasikara, ny sabotsy ho avy izao. 13 novembre 2020
Milaza ny hanao tatitra amin’ny vahoaka momba ny raharaham-pirenena izy ireo kanefa finiavana te hamboly korontana hatrany.
Tsy vao sambany fa efa nifanesy ireo hetsika nokasain’ireo solombavam-bahoaka avy amin’ny antoko Tim miaraka amin’ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny vondron’ny mpanohitra eto Madagasikara hatao. Hatreto, nandamoka hatrany izany satria hetsika tsy nahazoana alalana no miharo fanakorontanana saim-bahoaka ihany koa. Efa nisy ny tany Mahajanga izay rava maina, nisy ihany koa ny tany Toamasina, Fianarantsoa ary tany Ambatondrazaka. Nitafy fahafaham-baraka hatrany ireo Depiote Tim tamin’ireo hetsika satria zara raha naharototra ny olona ny hetsika izay nataony. Ireo akanga sisa nanamborana tamin’ireo mpanara-dia ny antoko Tim sisa no tonga namaly ny antso.
Ny sabotsy izao milaza ny hamory vahoaka eo amin’ny Magro Antsirabe indray izy ireo. Ireo solombavambahoaka Tim miaraka amin’ny loholona mpanohitra sy ny vondrona Panorama no mikarakara ny hetsika amin’io fotoana io. Hanao tatitra amin’ny vahoaka momba ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka ary ny fomba hitantanan’ny Mpitondra ny Firenena ankehitriny no voalazan’izy ireo ho vontoatin’ny hetsika. Fiomanana amin’ny fakana fahefana no nambara fa tanjon’izy ireo amin’izao hetsika fitetezam-paritra izao, izay midika ho fanakorontanana saim-bahoaka mba hankahala ny Fitondram-panjakana ankehitriny. « Tany mandala ny demokrasia i Madagasikara dia misy ny mpanohitra. Ny mpanohitra dia miomana hitantana ny Firenena rahampitso ary mitsikera ny zavatra tsy mety eo amin’ny fitantanana ny Firenena », hoy ny fanazavana. Milaza ny tsy hihemotra manoloana an’ireo endrika sakantsakana hataon’ny Mpitondra ireto mpanohitra. Ankoatra izay anjara asan’ny parlemantera, hoy ny fanazavana, ny manao tatitra amin’ny vahoaka malagasy ary azon’izy ireo atao tsara ny manao izany manerana ny Nosy.
Hatreto dia fialana bala fotsiny anefa ilay fanaovana tatitra fa ny handoto ny sain’ny olona no tena imason’ireo solombavambahoaka Tim ireto. Ny lalàna mifehy ny asan’ireo parlemantera dia any amin’izay Distrika nahalany azy tsirairay ireo Depiote no manao tatitra fa tsy mitety Faritra velively. Maro ireo efa naneho hevitra mikasika izany ary nilaza fa kajikajy politika ary fanaovana fitaovana politika ny Antenimieram-pirenena no ataon’ireo solombavambahoaka Tim ireo.
Olona fito nalefa eny Tsiafahy, vehivavy iray notazomina eny Antanimora FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (1192) 11 janvier 2021 Mety hiafara amin’ny fanenjehana lehilahy iray any Mayotte FANDRANGITANA ADIM-POKO (121) 11 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (113) 13 janvier 2021 Polisy nandeha môtô maty nohitsahin’ny kamiao LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TENY MAHAZO (80) 11 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (76) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (73) 13 janvier 2021